तरकारीमा भएका हानीकारक रसायनलाई यसरी सफा गर्न सकिन्छ, तरिका सहित - यादका टुक्रा
7 hours ago 339 Views
स्वास्थ्यका लागि हामी हरियो सब्जी, फलफूल सेवन गर्छौं । तर, हामीले दिनहुँ खाने यि खाद्यपदार्थमा बिषाक्त तत्व पनि हुन्छ । त्यसैले यस्ता खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुअघि सतर्क रहनै पर्छ । यस्ता तरकारीहरु खानाले तरकारीमा भएका हानिकारक रसायनहरु पनि हाम्रो शरिरमा प्रवेश गर्छन् जसले गर्दा हामी आफुले खाएका खानेकुराहरुको कारणले नै रोगी बन्ने गर्छौँ । यसैले तरकारीहरुमा भएका हानीकारक रसायनहरु कसरी सफा गर्ने भन्ने जान्न जरुरी छ ।
कसरी विषाक्त हुन्छ ? : व्यवसायिक रुपले गरिएको खेतीमा किटाणु र कीटनासक औषधी बढी नै प्रयोग गरिन्छ । यसरी हामीले खाने सब्जी बिषाक्त बन्छ । सब्जी र फल चम्काउन र धेरै समयसम्म सुरक्षित राख्नका लागि पनि बिभिन्न रसायनको प्रयोग गरिन्छ । फललाई चम्काउन वार्निश जस्ता रसायन लगाइन्छ । खानाको माध्यामबाट हामी त्यही हानिकारक तत्व सेवन गरिरहेका हुन्छौं ।
के हुन्छ असर ? : बिषाक्त खानेकुराको सेवनले हामीलाई दीर्घकालिन रुपमै रोगी र जिर्ण बनाउँछ । यस्ता खानेकुरा खानसाथ फुड प्वाइजनिङको समस्या हुन्छ । शरीरमा बिकारयुक्त तत्वको मात्रा बढ्छ । हाम्रो भित्री अंगलाई क्षति पुर्‍याउँछ । यस्तै खानेकुराको कारण क्यान्सर जस्ता रोग समेत लाग्न सक्छ ।
के छ उपाय ? : धेरैजसो फलफूल, सब्जीलाई ताजा पानीमा सफा गरेर सेवन गर्छन् । यति मात्र पर्याप्त छैन । यसले फलमा चम्काउन लगाएको तत्व जाँदैन । यदि यसलाई खाइयो भने पाचनयन्त्रमा असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले बजारमा खरिद गरेर सागसब्जी सेवन गर्नुभन्दा आफैले करेसाबारीमा जैबिक बिधीबाट सागसब्जी उत्पादन गर्नु राम्रो उत्तम हुन्छ । खासगरी शहरिय जीवनशैलीमा यो अलि गाह्रो हुनसक्छ । किनभने घर बनाएपछि पर्याप्त ठाँउ हुँदैन, जहाँ सागसब्जी रोप्न सकियोस् । डेरामा बस्नेहरुका लागि त यो थप समस्या बन्छ ।
यद्यपी हामीले स-सना गमलामा पनि सागसब्जी लगाउन सकिन्छ । अहिले त्यस्ता बिधीबारे पनि पर्याप्त अभ्यास भैरहेका छन् । भान्सामा उत्पादन हुने जैबिक पदार्थलाई मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । घरको छल, बार्दली आदिलाई यसका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपी दैनिक व्यस्तताको कारण पनि बजारबाट किनेर सागसब्जी खानुपर्ने बाध्यता धेरैलाई हुन्छ । फलफूल लागि त हामी बजारमै निर्भर रहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सागसब्जी, फलफूल सेवन गर्ने त ?
नुनयुक्त पानी : बीरे नुन मिसाएको पानीले सागसब्जी तथा फलफूल सफा गर्दा किटनासक पनि पखालिन्छ । नुन मिसाइएको पानीमा सब्जी एवं फल १० मिनेटसम्म भिजाएर रख्ने । त्यसपछि सफा पानीले पखाल्ने । भेनिगर : भेनिगरको सहयोगले किटाणु एवं किटनासकलाई सजिलै सफा गर्न सकिन्छ । पानीमा एक कप ह्वाइट भेनिगर हाल्ने र त्यसमा फल एवं सब्जी पाखल्ने ।
बेकिङ सोडा : वेकिङ सोडाले पनि किटनासकलाई पूर्ण रुपमा सफा गर्छ । ५ गिलास पानीमा ४ चम्चा वेकिङ सोडा मिलाउनुपर्छ, अब यो पानीमा सब्जी र फल १५ मिनेटसम्म डुबाउने । बेसारयुक्त पानी : बेसारमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण पाइन्छ, जसले किटाणु नष्ट गर्छ । तातो पानीमा केहि बेसार मिश्रण गर्ने । त्यसमा सब्जी एवं फल डुबाइदिने । पछि त्यसलाई सफा पानीले पखाल्ने ।
Don't Miss it दुधमा बेसार हालेर पिउनुका यी हुन् चमत्कारी फाइदाहरु
Up Next खाना पकाउँदा गरिने यस्ता साना गल्तिले रोगी बनाउँछ
कागतीका बेफाइदा पनि छन्, यस्ता अवस्थामा त खानै हुदैन
5 months ago 3916 Views
बच्चाहरुको एक आपसको झगडा नराम्रो मात्रै होइन, यस्तो राम्रो पनि हुन सक्छ
पुनर्जन्मका बारेमा विज्ञानले यस्तो भन्ने रहेछ, हामीलाई थाहै छैन
मृत्युपछि के हुन्छ ? यो अन्त्यहिन प्रश्नको हो । अहिले सम्म यसको निचोड फेला पर्न सकेको छैन । यद्यपी के…
7 months ago 546 Views